ဖုန်းကနေ မြန်မာစာတန်းထိုးရှပ်ရှင်ကားများ ထည့်ပြီးကြည့်ကြမယ် ~ Free Mobile Sharing
9:51 PM Android Apps, Android Tutorials, သိမှတ်ဖွယ် 44 comments
wa tote March 11, 2014 at 5:38 AM
movies ka kyi loz ya par tal dar pal mae myanmar font ka ma paw bu phyit nay tal bal lo lote ya ma lal
wa tote March 11, 2014 at 5:42 AM
movies ka I, Frankenstein movies par bar myar lo at loz lal ma thi bu
Naylin Naylin March 11, 2014 at 4:40 PM
Djjoe man March 11, 2014 at 6:10 PM
မြန်မာလိုမရဘူးဆိုတာ ကျနော်ရေးထားတဲ့ပို့စ်ကို နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ရသွားမှာပါ ။
ဒီလိုပါကို ကိုယ်ကြည့်မည့်ထိုကားရဲ့ မြန်မာစာတန်းထိုး srt ဖိုင်လေးကို ကျနော်ပေးထားတဲ့ဆိုက်မှာ သွားရှာဒေါင်းလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် srt ဖိုင်နဲ့ ကိုယ့်မူဗီးကားနဲ့ နာမည်တူထားထားပေးရမှာဖြစ်သလို ဖိုဒါတစ်ခုထဲမှာထားထားရပါမယ် ။
ပြီးရင် MX Player နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ပြီး ပြထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာဖောင့်ကို အပ်လိုက်ယုံပါပဲ ။
တစ်ခုသိထားရမှာ အကိုဒေါင်းလိုက်တဲ့ srt ဖိုင်က Zip နဲ့ကြလာမှာပါ အဲ့တာကြောင့် ဇစ်ဖြေရပါဦးမယ် ။ အထဲက srt ဖိုင်လေးထွက်လာပါမယ် ။
ဖုန်းနဲ့ ဇစ်ဖြေနိူင်တဲ့ဆော့ဝဲကတော့ Simple Unrar ဆော့ဝဲဆိုတာလေးကို မားကပ်မှာသွားဒေါင်းလိုက်ပါ ဖရီးပေးထားပါတယ် :)
Painghtet Zaw March 12, 2014 at 2:04 AM
SANAY TUN March 14, 2014 at 8:55 AM
နောက်ထပ် စာတန်းထိုးကားတွေဘယ်နေရာမှာ တစုတည်း ရနိုင်မယ့်နေရာလေး ညွန်ပေးပါလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းနဲ့ကြည့်တာမို့လို့ပါ
Djjoe man March 14, 2014 at 11:47 PM
tint April 8, 2014 at 6:55 PM
အကိုရေ iphone အတွက်ဆိုဘယ်လိုလုပါရမလဲ
Kyawkyaw December 6, 2016 at 9:14 AM
MXplayer pro ဖွင့်လို့မရဘူးဆရာကူညီb
lin paing March 20, 2014 at 12:00 AM
အကိုရေ MMF လင့်တွေကဖုန်နဲ့ဒေါင်းတာတခုမှမရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Djjoe man March 20, 2014 at 6:28 PM
ဖုန်းနဲ့လဲ ရပါတယ်အကို ။ ဒေါင်းလော့နှိပ်ခိုင်းတဲ့စာက ကြေငြာတွေနဲ့ရောနေပြီ မှားနှိပ်မိနေလို့ဖြစ်ပါမယ် ။
အကယ်၍အဆင်မပြေပါက MMF Group ထဲမှာ ပို့စ်တင်ပြီး အကူအညီတောင်းလိုက်ပါအကို ။
Ayuu Caca March 27, 2014 at 4:52 AM
MMF ကdown လိုမရဘူး
Ayuu Caca March 27, 2014 at 4:54 AM
goodboylay May 12, 2014 at 8:25 AM
အဆင်မပြေပါအားလုံးပြတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲဗီဒီယိုပါကြည့်ပြီးလုပ်တာပဲ မြန်မာစာတော့ပေါ်ပါတယ်ဘာတွေမှန်းမသိဘူးနားမလည်ဘူးပြောင်းပြန်တွေဇောက်ထိုးတွေဖြစ်နေတယ်လုပ်ပါဦးဗျာ ဖုန်းက huawei c8816 v4.3 ပါမြန်မာဖောင့်မှန်မှန်ရှိပေမယ့် root တော့မဖောက်ထားပါဘူး
yoyo my file mhar bro link ka paw tal..mx player ka choice yin ma paw tot bbuu..lote par ohn plz..
Anonymous May 26, 2014 at 1:30 AM
ako yae file ka mx player mhar choice yin ma paw tot bu..yoyo my file htel mhar so shi tal..download file change pay loe ya ma lar...i ph nae ur download file nae sonething wrong loe htin tal..plz help me naw..plz instruction..galaxy ace plus par..
mmf file ka download lote pe yoyo my file ka nay so shi tal..mx player ka choice p so yin download file htel mhar bar mha ma paw buu..eal dar lay plz help par ohn byar..sub lae 1folder htel mhar atutu htar pay htar tal..but tachar eng sar twe paw nay tal..mmf ko download file ka nay choice mal so tot ma paw tot pyan bu..something wrong nay pe..depend on version?
ဖုန်းနဲ့ လုပ်နည်းအတိုင်းလုပ်တာ လုပ်လည်းပြီးရော အတုံးတွေပဲပေါ်တယ် မရဘူး ကူညီပါဦး
shwe min September 8, 2014 at 6:22 AM
other language srtရှာလို့ရရင်ဘဲအကို
Poe Ei Naing December 25, 2014 at 8:30 AM
Poe Ei Naing December 25, 2014 at 8:34 AM
video file က full ဖြစ်နေပြီးတော့ srt file က part 1 /2 နှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ် အဲဒါ နာမည်တူက တစ်ခုပဲ လုပ်လို့ရတယ်
ဇာတ်လမ်း တစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ part2ကို နာမည်တူ လုပ်ကြည့်တာ စာတန်းက ဇာတ်လမ်း အစ မှာပဲ စာတန်းထိုးတယ် အဲဒါ အဒီ စာသားကို မှန်အောင် လုပ်လို့ရလား???
ကိုယ်တိုင် ကပဲအသုံးမကြတာလားကြော်ငြာတွေပဲရှုပ်တာလားတော့မသိဘူး၎ရက်၅ရက် ရှိနေပြီဒေါင်းလို့ကိုမရဘူးအကို နည်းလမ်းသိ ပြီးလုပ်မရတာ ဖုန်းတောင်ပေါက်ခွဲခြင် လာပြီ
yanaung February 24, 2015 at 9:36 PM
Srt ဆိုတာဘာကို​ပြောတာလဲခင်​ဗျာ ရှင်​ပြ​ပေလိုရမလာဗျာ သိသူများ ​ကျေးဇူးပါပဲ ခင်​ဗျာ
yanaung February 24, 2015 at 10:27 PM
kophyo wai June 4, 2015 at 3:31 AM
AIBI Myanmar August 10, 2015 at 4:49 AM
srt ဆိုတာ အရှည်ကိုတော့မသိဘူး စာတန်းကိုပေါ်စေသောဖိုင်လို့ပဲနားလည်ပေးထားပါ
Piang No August 12, 2015 at 1:25 PM
နာလည်းတဲ့သူရှိရင်​​ပြောပြကပါဗျာ...မြန်​မာစာတန်းထိုးဖိုင်က ကို download တဲ့ video့နာမည့်​သွားရှာရမှာလား
peter jack August 29, 2015 at 10:32 PM
Unknown September 9, 2015 at 10:20 AM
Eng subtitleကို myanmar subtitle​ပြောင်းနည်း​လေးသိချင်​လို့ပါ
mbinz n1500 October 1, 2015 at 2:24 AM
အကိုpirates of the caribbean ကားsrtဖိုင်းကိုဘယ်​မှာရှာdownရမလဲ
ERG YANGON January 8, 2016 at 9:47 PM
Jho Mk January 13, 2016 at 10:53 AM
....ကိုကြိုက်​တဲ့ကား ....srt ဖိုင်း မရှိရင်​ ကြည့်​လို့မရ​တော့ဘူး.....
ငါကြိုက်​တဲ့ကား... The Heirs episode4with English Sub
Srt ..ဖိုင်း စာတန်းထိုး မရှိဘူး..အခု ကြည့်​လို့မရဘူး ....
lu Lu February 4, 2016 at 9:39 AM
အကို ဒေါင်းမရဘူးဗျ ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲ
Mx player pro သုံးမရဘူး
Kyawkyaw December 6, 2016 at 9:21 AM
Kyawkyaw December 6, 2016 at 9:22 AM
ဂျေမီ jme July 22, 2017 at 8:53 AM
မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်ကားကောင်းများ August 10, 2017 at 5:08 AM
Thet Aung January 7, 2018 at 10:23 AM
ဆောင်ဦးရွက်ကြွေချစ်သက်သေ မြန်မာစာတန်းလေး လုပ်ချင်လို့ပါ။ သိတဲ့သူများ ကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။